महासंघले आम व्यवसायीको विषयमा वकालत गर्नु पर्छ : दिनेश श्रेष्ठको अन्तरवार्ता — Arthatantra.com
Arthatantra.com > Headline > महासंघले आम व्यवसायीको विषयमा वकालत गर्नु पर्छ : दिनेश श्रेष्ठको अन्तरवार्ता
साना व्यवसायीले मिति नाघेको सामान चाहेर किनेको होइन । ६ महिना मात्र म्याद भएका उत्पादनहरु आयात गर्न भन्सारले किन दियो ?
भन्सारको त्यो कर्मचारीलाइ कारबाही गर्नु पर्छ की पर्दैन ? अब हाम्रो खुला सिमाना आर्थिक रुपमा शिल गर्नु पर्ने अवस्था आएको छ । करका दरहरु उच्च भएका कारण बोर्डरमा नेपाली क्षेत्रको व्यवसाय सुन्य अवस्थामा छ भने छिमेकी देशपट्टी चहलपहल छ । सरकारले द्धन्द्धका कारणले खर्च धेरै आम्दानी थोरै भएको भन्दै १० प्रतिशतको भ्याटलाई ३ प्रतिशतले वढाएर १३ प्रतिशत कायम ग¥यो । अहिलेको अवस्थामा द्धन्द्ध त छैन । त्यसैले भ्याटको दरलाई घटाउनु पर्नेमा सरकारले त्यसमा कुनै ध्यान नदिएको देखिन्छ । करका दरहरु धेरै भएको खण्डमा चोरी पैठारी बढी हुन्छ । अनियमित कारोबार धेरै हुन्छ । कर, भन्सार, रोजगार तथा बैंक सम्बन्धमा धेरै समस्याहरु छन । यस्ता समस्याहरुलाइ समाधान गर्नका लागि महासंघ लागि पर्नेछ ।
२०७७ मंशिर १० गते १४:४० मा प्रकाशित
एनएमबि सुलभ इन्भेष्टमेन्ट फण्ड–१ परिपक्क, १६ कम्पनीको शेयर लिलामीमा
२ वर्षमा पूर्ण रुपमा लोडसेडिङ घट्ने मन्त्रीको उद्घोष
नेसनल लाइफको ९९ लाख ३६ हजार कित्ता हकप्रद सेयर आउँदै
अर्गेलीको बोक्रा बेचेर एक वर्षमै साढे ३ करोडभन्दा बढी आम्दानी